कुन स्मार्टफोन प्रयोग गर्छन् विश्वका शक्तिशाली व्यक्तिहरु ? | Jukson
कुन स्मार्टफोन प्रयोग गर्छन् विश्वका शक्तिशाली व्यक्तिहरु ?
(एजेन्सी) विश्वमा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको संख्या दिनानु बढ्दै गइरहेको छ । केही वर्षमा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरुको संख्या दोब्बर हुने केही तथ्यांकहरुले देखाएको छ । यस्तोमा विश्वका चर्चित तथा शक्तिशाली व्यक्तिहरुले भने कुन स्मार्टफोन प्रयोग गर्छन् होला ? यो धेरैका लागि कौतुहलताको विषय हुनसक्छ । यहाँ विश्वका कुन नेताले कुन स्मार्टफोन प्रयोग गर्छन् भनेर प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेरेन्द्र मोदी, भारतीय प्रधानमन्त्री
नरेन्द्र मोदी धेरै एप्पलका ग्याजेटहरु प्रयोग गर्छन् । गत साल चुनाव जितेपछि अहम्दाबादबाट दिल्ली सर्दा उनीसँग एप्पलको आइप्याड र ल्यापटप थियो । उनी आइप्याडमा दैनिकरुपमा समाचारहरु पढ्छन् । चुनावको बेला उनले लिएको एउटा सेल्फी निकै चर्चित बनेको थियो जुन उनले आइफोनबाट लिएका थिए । यस वर्ष उनले सामसुङ ग्यालेक्सी एस फाइभ (गोल्ड) चलाउँदै गरेको देखिएको थियो ।
हिलारी क्लिन्टन, पूर्व अमेरिकी सिनेटर
हिलारी क्लिन्ट कयौं पटक आफ्नो ब्ल्याकबेरी फोनको साथमा देखिएकी छिन् । हिलारीको आफ्नो फोनसँग यति धेरै फोटोहरुछन् कि उनको टम्बलर वेभसाइट पनि रहेको छ ।
ग्याजेटको मामिलामा हिलारी स्पेसिफिक छिन् ।
बाराक ओबामा, अमेरिकी राष्ट्रपति
गार्जियन पत्रिकाका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा ब्ल्याकबेरीको फोन प्रयोग गर्छन् । अन्य देशका जासुस र खुफिया एजेन्सीहरुले फोनबाट गोप्य सूचना हासिल गर्न नसकून् भनेर उनले प्रयोग गर्ने फोनमा निकै सुरक्षित बनाइएको हुन्छ । वेभसाइट स्ल्यास गियरले सन् २००९ मा प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टमा ओबामाको मोबाइलको मूल्य ३ हजार ३ सय अमेरिकी डलर पर्ने बताएको थियो ।
भ्लादिमिर पुटिन, रुसी राष्ट्रपति
रुसी राष्ट्रपति पुटिनले आफू कुनै फोन नबोक्ने बताउँछन् । पूर्व केजिबी (खुफिया एजेन्सी) का प्रमुख रहेका पुटिनका अनुसार फोनको प्रयोगले सुरक्षामा खतरा हुन सक्छ । तर ब्रिटेनको टेलिग्राफको अनुसार पुटिन सन् २०१२ देखि एमटिएसले बनाएको ग्लोनास ९४५ फोन प्रयोग गर्छन् ।
बेलायतका राजपरिवार आइफोन मनपराउँछन् । द नेक्स्ट वेभका अनुसार गत सालको ओलम्पिकका दौरन राजकुमार विलियमले आइफोन प्रयोग गरिरहेको भेटिएको थियो । रानी एलिजावेथले पनि आइप्याड किन्न अर्डर दिएकी थिइन् ।
नवाज शरीफ, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री
गार्जियनको रिपोर्ट अनुसार नवाज शरीफ ब्ल्याकबेरी फोनको प्रयोग गर्छन् । शरीफ ब्ल्याकबेरी मेसेन्जरका फ्यान हुन् र आफ्नो नजिककासँग यसैको मद्दतले संवाद गर्छन् ।
डेभिड क्यामरुन, बेलायती प्रधानमन्त्री
बेलायतका प्रधानमन्त्री पनि ब्ल्याकबेरी कै फ्यान हुन् । उनलाई सुरक्षाको कारण देखाउँदै उक्त फोन प्रयोग नगर्न भनिए पनि उनी त्यही फोन प्रयोग गरिरहेका थिए । तर, पछिल्लो समय फोनमा कुरा गर्दै गरेको उनको सेल्फीको मजाक उडाएपछि फोनबाट टाढा रहेको डेलीमेलले जनाएको छ ।
किम जोङ उन, नेता उत्तर कोरिया
उत्तर कोरियाली तानाशाह किम जोङको केही समयअघि फोनको साथमा फोटो लिइएको थियो । उक्त फोटो सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित बनेको थियो । धेरैले उक्त फोन एचटिसीको बटरफ्लाई रहेको अनुमान गरेका छन् । उत्तर कोरिया एरिरांग नामक आफ्नै स्मार्टफोन बनाउँछ । उत्तर कोरियामा केवल १० प्रतिशत जनसंख्या स्मार्टफोन प्रयोग गर्छन्, बाँकीलाई फोन प्रयोग गर्ने अनुमति छैन ।
एन्जेला मार्केल, चान्सलर जर्मनी
जमर्नीकी चान्सलरसँग दुईवटा फोन छ । एउटा नोकिया ६२६० र अर्को ब्ल्याकबेरी जेड १० । पार्टीको कामका लागि उनी नोकिया प्रयोग गर्छिन् भने अन्य कामको लागि ब्ल्याकबेरी । उनको फोनको चर्चा त्यतिबेला भएको थियो जब अमेरिकाले उनको फोनमाथि जासुसी गरेको थियो । यस विषयमा मार्केलले ओबामासँग स्पष्टिकरणसमेत माग गरेकी थिइन् ।
source : http://www.ratopati.com/2015/06/08/239124.html
जहाँ छोरा जन्मनु दुर्भाग्य मानिन्छ
प्रेतशक्ति प्राप्तीका लागि आफ्नै भतिजीको बलि दिए तान्त्रिकले
बर्दियामा झारफुक गर्ने निहुँमा बलात्कार
सांकेतिक भाषामा बलात्कृत महिलाले भनिन्, ‘१० जना सशस्त्र पालैपालो ममाथि चढे’